ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး – FERD
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပါသည်။
လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ နော်ဝေနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ State Secretary, H.E. Ms. Marianne Hagen၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် နော်ဝေသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အဆိုပါ သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ကိုယ်စား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ State Secretary, Ms. Marianne Hagen တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
သက်တမ်းတိုးနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုစီမံကိန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ထူထောင်ရေးတို့ တွင် အထောက်အပံ့ကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
Category: သတင်း ဒီဇင်ဘာ 9, 2019
PreviousPrevious post:ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (2nd Myanmar Development Effectiveness Roundtable – 2nd MDER)NextNext post:ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) က ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာလွှာ (Letter of Understanding- LoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း။